ဖြေရှင်းရန် မဖြစ်နိုင်သော ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ခြင်း | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 25/02/2013
Posted in: တရားဟောချက်.	Tagged: တရားဟောချက်.	2 Comments
သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က သူ၏ ပရောဖတ်ဖြစ်သော မောရှည်အားဖြင့် အချက်သုံးချက် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုအချက်များမှာ လူတို့ ကြံစည်တွေခေါ်တတ်သော အကြံအစည်မျိုးမဟုတ်။ မောရှည်က သူ၏ လူများကို ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြောလိုက်သည်မှာ –
“ထိုနောက်မှ မောဘ အမျိုးသားနှင့် အမ္မုန်အမျိုးသားတို့သည် ဧဒုံအမျိုးသား အချို့နှင့် တကွ၊ ယောရှဖတ်ကိုစစ်တိုက်မည်ဟု ချီလာကြ၏။ အိုင်ကြီးတဘက်၊ ဧဒုံပြည်ဘက်က များစွာသော အလုံးအရင်း စစ်ချီလာ၍ အင်္ဂေဒိအမည်ရှိသော ဟာဇဇုန္တာမာမြို့မှာ ရှိကြပါသည်ဟု ယောရှဖတ်အား ကြားလျှောက်လျှင် –
← ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးရာတွင် ထားရှိရမည့် စိတ်သဘော
ဘာမျှမရှိခြင်း၏ အခြားတစ်ဘက်တွင် →
2 comments on “ဖြေရှင်းရန် မဖြစ်နိုင်သော ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ခြင်း”
570213 on 25/02/2013 at 11:43 PM said:
အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ဝေငှချက်ပါပဲ။ ခွန်အားရတယ်ဆရာ။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
piaohsiu wu on 05/03/2013 at 1:58 PM said:
God bless saya family and all”””””’